लगातारको खडेरीले बैतडीका विभिन्न स्थानका खेतीयोग्य जमीन बाँझै
बैतडी, ४ माघ । लगातारको खडेरीले बैतडीका विभिन्न स्थानका खेत बाँझै रहेका छन् । समयमा हिउँदे वर्षा नहुँदा खेत बाँझै छोड्नुपरेको किसानको गुनासो छ । सिँचाइको सुविधा नभएका ठाउँमा हिउँदे वर्षा नभएकाले गएको चार वर्षयता हिउँदेबाली लगाउन नपाएको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–३ का बलराम तिरुवाले बताउनुभयो ।
के साँच्चै नायिका ऋचा शर्मालाई हर्ट अट्याक भएकै हो त ? उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर के भन्छन् ?? (हेर्नुहोस् भिडियो कुराकानी)
बागलुङको बाङ्गेचौर खेल मैदानलाई रङ्गशालाको रुपमा विकास गरिने